घोषणा गर्न बाँकी केही छ की सकीयो प्रम ज्यु? - Ek Jamarko
Home / विचार / घोषणा गर्न बाँकी केही छ की सकीयो प्रम ज्यु?
घोषणा गर्न बाँकी केही छ की सकीयो प्रम ज्यु?
~संसारभर जतासुकै घोषणा लाई राजनितीमा पकड बनाईराख्ने अचुक हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको पाईन्छ। हाम्रो नेपालमा मात्र होईन संसारका निकै विकसीत देशका नेताहरुले पनि आफ्नो कार्यकालमा या कार्यकाल सुरुहुनु अगाडी चुनाव को मुखमा निकै ठुला ठुला घोषणा हरु गर्ने गर्दछन। कर कटौती, आप्रवासी हरुको ब्यवस्थापन र सुरक्षा चासो लगायतका घोषणा हरु विकशीत देश हरुमा निकै लोकप्रिय रहिआएका छन।
विकाशसील देश हरुमा रोजगारीको सृजना, प्रतिब्यक्ती आयमा गरीने बढोत्तरी र जनताले पाउने सेवा सुविधाको विषयमा घोषणा गर्ने चलन छ र त्यसरी गरिएका घोषणा हरु ति देशमा निकै लोकप्रिय पनि हुन्छन । किनकी त्यस्ता घोषणा कार्यन्वयनमा आएमा रोजमर्राको जिन्दगी लाई सहज मात्र बनाउदैन यौटा उत्कृष्ट भविष्य निर्माणको लागी मार्गदर्शन समेत गर्दछ र समग्र देशको उन्नतीमा सरोकार राख्ने घोषणा भएको नाताले घोषणा गर्ने हरु पनि आफुले गरेको घोषणा प्रति संबेदनशील हुन्छन । त्यो घोषणा पत्याएर ति नेता लाई पच्छ्याएका जनता निरास पनि हुनु पर्दैन कीनकी ति घोषणा हरु झुठ को जगमा उभीएर गरिएका हुदैनन।
हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख मुलुक जहा राजनैतिक अस्थीरताले दह्रो संग जरा गाडेको छ त्यस्तो देशमा घोषणाको अर्थ अथवा महत्व कति र कस्तो प्रकारको छ विचारणीय पक्ष हो । हुनत कहानी नै छ हाम्रो। "उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक" । यदी तपाई विकाश निर्माणमा ठुलो फड्को मार्न चाहानुहुन्छ भने ठुलै घोषणा हरु चाहिन्छन कीनकी घोषणा लाई सुरुवातको पनि सुरुवात भनेर मानिन्छ। यदी तपाई कुनैकामको प्रारम्भमा हुनुहुन्छ भने म यो काम गर्दैछु भनेर घोषणा गर्नु अती जरुरी हुन्छ । घोषणाले कार्य प्रतिको दायित्व मात्र सम्झाउदैन । समयमा काम फत्ते गर्ने जिम्मेवारी पनि थपेको हुन्छ तसर्थ पनि काम गर्नु अगाडी आफ्नो कामको सही घोषणा हुनु अती आवस्यक छ ।
घोषणाको सिलसीलाको बारेमा चर्चा गर्दा हामीले याद गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने अव हाम्रो देशमा हाम्रा नेताहरुले घोषणा गर्न अरु बाँकी केही छ की सकीयो..? असम्भव त केही छैन । मुलुक सम्पन्न हुदै गयो भने रेल पानीजहाज लगायत घरघरमा ग्यास र सबै जनतालाई रोजगार असम्भव कतै छैन। तर के घोषणा गर्न पाईयो या रहर लाग्यो भन्दैमा "अवको केही वर्षमा हाम्रो आफ्नै यान अन्तरिक्षमा पुग्नेछ" भन्ने घोषणा गर्नेकी नगर्ने? नेपाली बैज्ञानिकले चन्द्रमामा वस्ती वसाल्ने विषयमा अध्यन गर्नेछन भनेर घोषणा गर्नेकी नगर्ने? प्रश्न यत्ती हो।
यसरी सरासर हेर्दा अवको पचास वर्ष पछाडी नेपालमा रेल गुड्यो भने अथवा नेपालको कार्गो बोक्ने माल जहाज समुद्रमा तैरियो भने त्यो वेलामा एमाले का कार्यकर्ता हरुले यो 'ओली को सपना' हो भनेर दावी गर्ने वहाना तयार पारेर राखीदिए प्रधानमन्त्री ले। ओलीको 'शेष' पछी कसैले ग्यास पाईप लाईनको कुरो गर्यो भने ओली भएको भए ग्यास लाईन आईसक्थ्यो भन्ने सपना वेच्न सजीलो हुनेभो एमाले लाई । अहीले जसरी मदन भण्डारी वचेको भए भनेर कतिपय पुरा गर्न नसकीने या आशा गर्न नसकीने तर्कहरु वेचिन्छ।
भुपरिवेष्ठीत मुलुकको आफ्नो कार्गो क्यारीयर हुनै नहुने होईन। कतिपय भुपरिवेष्ठीत मुलुक हरुले छिमेकी देशका नजिकका वन्दरगाहा हरु भाडामा लिएर आफ्ना जहाज चलाईरहेको देख्न सकीन्छ । तर त्यसको लागी देशको विकाश , जनताको क्रयशक्ती र राष्ट्रले घोषणा गरिएको काममा गर्नसक्ने लगानी ठुलो भुमीका खेल्दछ।
कतै तुईन को खण्डहर फेलापर्यो भने त्यसको नजीकै ओलीको प्रतिमा स्थापीत भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । पानी जहाजमा नेपाली झण्डाको साटो ओलीको मैनको प्रतिमा राख्ने ब्यवस्था मिलाए झन राम्रो हो । अव हाम्रो देशमा साना ठुला सबै कामका घोषणाहरु लगभग गरेर सकीईसके । काम मात्र हुन बाँकी हो ।
घोषणा गर्न बाँकी केही छ की सकीयो प्रम ज्यु? Reviewed by Jamarko TV on मई 17, 2016 Rating: 5